को बन्ला प्रहरीमा अब नयाँ आईजी ? -
June 30, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on को बन्ला प्रहरीमा अब नयाँ आईजी ?
काठमाडौं १६ असार । नेपाल प्रहरीले अबको केही दिनभित्रै नयाँ प्रहरी प्रमुख पाउँदै छ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ९आइजिपी० ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली २४ असारपछि ३० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको हो ।
धेरै वर्षपछि यसपटक प्रहरीको आगामी महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी ) बाटै बन्नेछन् । वर्तमान आइजिपी ज्ञवालीसमेत सिधै डिआइजीबाटै आइजिपी भएका थिए ।
थप ६ जनामा कोरोनाको पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या २७३ पुग्यो
May 16, 2020 May 16, 2020 अखवार अनलाइन